5 Tena Saro-Pantarina Ny Toerana Ao Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Tena Saro-Pantarina Ny Toerana Ao Eoropa
Ny Eoropeana kaontinanta iray feno manan-karena tantara, miavaka ny tantara, niainany, ary indraindray dia ny zava-miafina. Isaky ny kaontinanta, dia ny hametraka ny ara-mystifying toerana. Na izany aza, toa hita fa Eoropa no misy ny tena mahavariana sy mahagaga ny toerana eto amin'izao tontolo izao. Zava-miafina foana ny manana antso mba sahisahy mpandeha. Ary noho izany, izany tsy mahagaga ny antony bebe kokoa sahisahy dia lavitra ho azy ny tanjona mba hitsidika ireo toerana ireo. Save A Train atambatra ny lisitry ny dimy toerana saro-pantarina indrindra ao Eoropa, izay azo antoka fa astound sy ny volana na dia ny tena za-draharaha ny mpandeha.
1. Tena Saro-Pantarina Ny Toerana Any Holandy – Giethoorn
Ny toerana voalohany tsy afaka fahazoan-dalana hidirana dia saro-pantarina eo amin'ny lafiny hoe tsy dia tena tsy manam-paharoa. Izany no hita tao amin'ny Holandy, ary dia tena mety ny iray amin'ireo tena mahafinaritra ny toerana dia afaka mitsidika. Giethoorn dia tanàna fa dia mitovy tsy misy hafa. Maro no mihevitra izany ho toy ny tonga lafatra getaway amin'ny fiainana maoderina. Tsy misy ny lalana sy ny zara raha misy olona miaina ao aminy. Raha ny tena izy, izany no karazana tapaka avy any amin'ny sisa amin'ny Holandy.
Ny fandaniana fotoana amin'ny Giethoorn dia ho tsapanao raha ianao no nandao ny tontolo maoderina sy ny fahoriana tanteraka. Ny fotoana dia lalitra, ary dia hahatsapa tanteraka mivaky loha. Araka ny fijery sy ny mahatsapa ao an-tanàna handeha, ny zavatra voalohany ho tsikaritrao ny fomba kely dia. Anao koa mahita fa vitsy dia vitsy ny lalana mba haka. Raha ny tena izy, hisy fomba mihoatra lakandrano sy ny sambo mitaingina azo noho ny lalana ny diany. Ny trano ao an-tanàna dia hanome anao ny taloha izao tontolo izao vibe.
2. Eisriesenwelt Ranomandry Zohy
Tokony mbola hahita anao any Aotrisy, tsy maintsy manomana ny fitsidihana ny iray amin'ireo lehibe indrindra zava-mahatalanjona voajanahary izay misy. Eisriesenwelt iray amin'ireo lehibe ny ranomandry zohy izay misy eto amin'izao tontolo izao. Raha ny tena izy, rehefa nadika ho amin'ny teny anglisy, izany dia midika hoe Izao tontolo izao ny olona goavam-be. Rehefa niroso tao mahafinaritra ity lava-bato dia ho tsapanao raha ianao no eo amin'ny andian-ny fanisàna movie. Misy zavatra maro izay mahagaga momba ny Eisriesenwelt.
Voalohany, ny naripaka daholo ny sarangan'olona haben'ny ny ranomandry lava-bato ny tenany dia hamela anareo ho talanjona. Mandalo dia afaka maka anao eo ho eo ny ora iray sy tapany ho tanteraka. Faharoa, ny afovoan ' ny lava-bato dia handao anao chilly sy gaga. Maro olo-malaza ice, ranomandry sary sokitra, sy ny ranomandry rindrina dia tena mahavariana sy handao maro no very noho ny teny. Ny sasany amin'ireo goavana ranomandry ny saha dia lava noho 20 metatra! Ao amin'ny maizina ny lava-bato, ny ranomandry nanazava ny manezioma jiro dia “tonga velona.” Toy ny hazavana mandeha ny alalan ' ny fahazavana sy ny dihy ao afara, ny fahatsapana ara-boajanahary zava-miafina dia tena namely anao. Raha fintinina, na iza na iza akaikin'ny Werfen, Aotrisy mila maka ny fotoana mba hitsidika Eisriesenwelt.
Salzburg ny Werfen Fiaran-dalamby
Munich ny Werfen Fiaran-dalamby
Innsbruck ny Werfen Fiaran-dalamby
Any vienne mba Werfen Fiaran-dalamby
3. Tena Saro-Pantarina Ny Toerana Mba Hitsidika Italia – Capuchin Catacombs Palermo
The Capuchin Catacombs Palermo afaka mandefa shiver teo ny hazondamosiko. Noho ny fientanam-po mpitady fa ankafizo ny fihetseham-po ny horohoro sy tahotra, ny catacombs no tsara toerana mba hitsidika. Ireo catacombs dia rakotra amin'ny morbidity sy ny zava-miafina ny isan'andro ny olona. Mitaky rehetra dia ny fitsidihana iray mba hahitana ny tenanao maka sary lehibe ny sasany amin'ny fiainana fanontaniana.
Ny tantara ao ambadiky ny Capuchin Catacombs dia tena mahavariana. Dia ny farany toerana izay nametrahana ho an'ny ny sisa ny olona an'arivony avy amin'ny lafim-piainana rehetra. Ny maro an'isa ao amin'ny catacombs dia mpitoka-monina sy ny mpanan-karena ny fotoana. Na izany aza, misy vitsivitsy mahazatra ny olona any koa. Ny catacomb mivelatra eo ambany ny monasitera sy fiangonana mifanakaiky. Nandeha namaky ny lalantsara ny catacombs, ho hitanao eo ho eo 8000 mummified vatana. Ny sasany amin'ireo no tena taloha, na dia niaraka indray ny 1600s. Ny vatany dia embalmed sy tsara voatahiry. Raha fintinina, ho mampatahotra toy ny catacombs toa, izy ireo dia malaza amin'ny mpizaha tany toerana halehany ary dia mendrika ny fitsidihana ho an'ireo izay afaka handray izany.
Marsala ny Palermo Fiaran-dalamby
Bagheria ny Palermo Fiaran-dalamby
Trapani ny Palermo Fiaran-dalamby
The Chateau de Brissac ao atsimo ny Mahatezitra, ny tanàna ao Loire Renirano Lohasaha. Izany no avo indrindra ny lapa ao manontolo France. Tsara tarehy io frantsay anati-dia indray ao amin'ny taonjato faha-15 ary dia nanohitra ny fitsapana ny fotoana. Mialoha ny fanavaozana ny Duke ny Brissac, izany Moyen Âge lapa izay mitondra ny datin ' ny hiverina any amin'ny taonjato faha-11. Na izany aza, ny Duke reconstructed izany an-grand Renaissance fomba lapa.
Chateau de Brissac mety ho toa toy ny olon-tsotra Chateau tamin'ny voalohany. Na izany aza, ao ambadiky ny isan'andro ny endrika ivelany isehoan'ny, misy saro-pantarina angano izay mahatonga ny maro mba mitsidika azy io. Maro masina tantara mifandray amin'ny antony sy ny chateau mihitsy. Ny malaza indrindra dia ilay angano ny Maitso Lady. Araka ny angano dia nisy namono tao amin'ny trano mimanda indraindray tamin'ny tapaky ny taonjato faha-15. La Dame Verte, na izy rehefa nanjary malaza, ny Maitso Lady, dia hoy mandehandeha ny lapa mbola. Maro no milaza fa izy ireo no nahita ny vehivavy iray ao amin'ny akanjo maitso mandeha ny alalan ' ny antony na nitsangana teo an-tampon'ny ny tilikambo. Ny amin'izao fotoana izao ireo mponina ao milaza fa efa zatra azy, fa maro ny mpizaha tany no natahotra. Ankoatra ny nahita azy, maro no milaza fa tsy afaka nandre azy moans manerana ny lapa any amin'ny tany am-boalohany ora maraina.
Rouen mba Paris Fiaran-dalamby
5. Tena Saro-Pantarina Ny Toerana Mba Hitsidika Any Belzika – Dinant
Dinant iray tanàna kely izay mitaona ny fahatsapana ny zava-miafina ny mpitsidika. Ilay tanàna dia ao amin'ny Namur faritanin'i Belzika. Izany no toerana tsara ho any raha toa ianao ka mieritreritra ny getaway faran'ny herinandro avy amin'ny tanàn-dehibe ny fiainana. Ny fitambaran'ny tanàna ny fiainana sy ny manodidina azy ara-boajanahary ny tontolo mahatalanjona. Ny tendrombohitra ao amin'ny mombamomba ny tanàna miaraka amin'ny renirano Meuse mikoriana ny alalan ' ny tanàna dia ampy mba hahafahan'ny olona handaka indray sy ny sorisory. Izany no voasambotra ny fon ' ny maro mpitsidika ary dia hahatonga anao mahatsapa ho toy ny ianao amin'ny tontolo hafa.
Bruxelles ny Dinant Fiaran-dalamby
Anvers ny Dinant Fiaran-dalamby
Ghent ny Dinant Fiaran-dalamby
Liege ny Dinant Fiaran-dalamby
Vonona ve ianao hijery ny maro ny toerana saro-pantarina izay Eoropa manolotra? Manomboka amin'ny dimy ireo tena toerana saro-pantarina sy hahita ny lalana mitondra anao. Ataovy azo antoka ny drafitra tsara ny fialan-tsasatra sy Boky Fiaran-Dalamby Tapakila ara-potoana miaraka amin'ny Save A Train!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Tena saro-Pantarina ny Toerana ao Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/most-mysterious-places-europe/- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)